Lafta-gareen oo Muqdisho soo gaaray iyo shirkii wadatashiga oo dib u dhacay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Lafta-gareen oo Muqdisho soo gaaray iyo shirkii wadatashiga oo dib u dhacay
Lafta-gareen oo Muqdisho soo gaaray iyo shirkii wadatashiga oo dib u dhacay
Madaxweynaha Maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa goordhaweyd soo gaaray Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Lafta-gareen ayaa si weyn loogu soodhaweeyay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan (Aadan Cadde), waxaana soodhaweyntiisa ka qayb qaatay Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda oo ay ka mid yihiin Xildhibaanno iyo wasiiro, waxaana qayb ka ahaa sidoo kale Saraakiil Ciidan, kuwaasi oo ka qayb qaatay soodhaweynta ballaaran ee loo sameeyay Madaxweynaha Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta-gareen.
U jeedka Lafta gareen ee uu Muqdisho u yimid ayaa ah ka qayb galka shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee doorashooyinka, kaasi oo la filayo in dhawaan uu ka furmo Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, waxaa horay Muqdisho u soo gaaray qaar ka mid ah Madaxda Dowlad Goboleedyada dalka, halka la sugayo kuwo kale ee dhiman ee uu ka mid yahay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaaahi Deni.
Sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in shirka loo madalsanaa in uu maanta furmo uu dib u dhac ku yimid, warar aan helnay ayaa sheegaya in shirku uu Sabtida u dhacay, arrimo farsamo awgeed iyo Madaxda dowlad Goboleedyada ee ka qeyb galaya oo aan weli soo wada dhameystirmin, lana filayo kuwa dhiman in maanta illaa berri soo gaaraan magaalada Muqdisho.
Maqaal XigaAxmed Madoobe oo soo gaaray magaalada Muqdisho